Ọkà okwu ikuku ikuku nke Tronsmart Studio, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | 03/11/2021 17:00 | Emelitere ka 04/11/2021 10:26 | Nyocha
Anyị na-alaghachi na Androidsis na nyocha na ụda na egwu dị ka ezigbo ndị na-akwado ya. Nyocha nke ụlọ ọrụ Tronsmart, ọzọ, wetara anyị ngwaọrụ ọhụrụ ịgbakwunye na katalọgụ ya buru ibu. Taa, anyị na-eweta Ọkà okwu ikuku ikuku Tronsmart Studio, a ọkà okwu dị ike na kọmpat na ọtụtụ ihe na-enye.
Ọ bụrụ na afọ ojujughị gị na ụda ahụ bụ ihe a na-anabata nke ọma na ịchọrọ ihe ọzọ. Ọ bụrụ na-amasị gị egwu egwu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ nnwere onwe nke ọkà okwu gị ka ọ na-aga n'ihu na usoro ụda gị, Tronsmart Studio nwere ike ịbụ ọkà okwu ị na-achọ.
1 Tronsmart Studio, ọkà okwu ị chọrọ
2 Ọkà okwu Tronsmart Studio Unboxing
3 Teknụzụ "TOP" maka Tronsmart Studio
4 Ime site na akụkụ nke Tronsmart Studio
5 Nkọwapụta tebụl
6 Uru na ọghọm dị na Tronsmart Studio
Tronsmart Studio, ọkà okwu ị chọrọ
Na Androidsis anyị enweela chi ọma iji nwee ike ịnwale ụdị ngwaọrụ dị iche iche metụtara ụda na ndị na-ekwu okwu. Ndị nwere ogologo oge na-aghọ ngwa kachasị mma iji nwee ike ịnụ ụtọ egwu na ekwentị anyị n'ụzọ dị mfe. Enwebeghị igwe okwu bluetooth n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs?
Igwe okwu ikuku ikuku nke Tronsmart nwere ike ịnye a itule n'etiti price na arụmọrụ nke ahụ adịghị maka ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na ahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọkà okwu maka ọfịs gị, ụlọ gị ma ọ bụ iji nye onyinye zuru oke, Tronsmart Studio bụ nhọrọ a tụrụ aro nke ukwuu. Ugbu a ị nwere ike ime nke gị Ụlọ ihe nkiri Tronsmart maka obere ihe karịa ka ị chere.
Anyị enweela ike ịchọpụta nke ahụ Ọ bụghị ndị na-ekwu okwu niile na-enye ọkwa dị otú ahụ nke ogo ụda na ike na ngwugwu dị otú ahụ. na ebu nke ngwaọrụ eletrọnịkị a na-echebara ya echiche mgbe niile maka ndị na-enwe mmasị iburu egwu ha n'ebe ọ bụla ha na-aga, na ọ na-ada ka ọ masịrị anyị.
Ọkà okwu Tronsmart Studio Unboxing
Ugbu a bụ oge ileba anya n'ime igbe Tronsmart Studio, dị ka anyị na-eme mgbe ọ bụla a bịara nyocha. Ọ dịghị ihe anyị na-apụghị ichere na ọ dịghị ihe tụrụ anyị n'anya. Dị ka ihe ezi uche dị na ya, anyị na-ahụ n'ihu ọkà okwu, na ihe mbụ Ọ na-adọrọ mmasị mgbe iwepu ya bụ ibu o nwere, dị nnọọ nso na kilogram zuru ezu.
Na mgbakwunye, anyị nwere chaja nja, na usoro USB Cdị C. a cable na nsọtụ abụọ Ogwe 3,5mm inwe ike jikọọ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ na-enweghị mkpa maka Bluetooth. Na n'ikpeazụ, a obere broshuọ ya na ndu mkpirisi na ya ntuziaka maka ojiji na nhazi.
Zụta ugbu a nke gị Ụlọ ihe nkiri Tronsmart na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Teknụzụ "TOP" maka Tronsmart Studio
Naanị Sound Pulse technology emebere iji kwalite ahụmịhe ige ntị site n'inye a Mmepụta ụda na-enweghị mgbagha n'agbanyeghị olu. Ụlọ ihe nkiri Tronsmart bụkwa nke mbụ nke ụlọ ọrụ na-emepụta teknụzụ TuneConn, ekele nke anyị nwere ike n'otu oge jikọọ ihe ruru 100 ọkà okwu enweghị eriri na otu ngwaọrụ. Ihe a na-ahụtụbeghị mbụ.
Mgbe anyị na-eche banyere ịzụrụ ọkà okwu, ọ dị ezigbo mkpa ike na ọ nwere ike ịnapụta, na ọ na-abụkarị otu n'ime ihe ndị anyị na-ele anya na mbụ. Mana ike a na-adakarị ụda olu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmara na Tronsmart ejiriwo akọ na uche rụọ ọrụ ka obere ọkà okwu a nwee ike inye ihe ọ bụla na-erughị ala. 30 W nke ike na na ha na-ada na a n'ezie ịrịba àgwà.
La nnwere onwe ọ bụkwa ebe siri ike nke Studio Wirells Ọkà Okwu. Daalụ maka gị batrị 2000 mAh abụọ nwere ike ijide Awa 15 anaghị akwụsị akwụsị Nke mmeputakwa. Batrị ekele maka teknụzụ ịchaji ngwa ngwa nwere ike ịbụ 100% n'ime naanị awa atọ.
El ụda ike nwere ọwa 2.1 adịghị aga na-ahụghị. Daalụ nke ngwa tronsmart ị nwere ike ịnweta ntọala dị iche iche, customization, equalization na niile audio mmetụta ị pụrụ iche n'echiche. Ahụmahụ nke iji ngwa na-enweta uru na ụda dị nso na ihe ị na-achọ mgbe niile.
Ọ pụtakwara na mgbochi mmiri ị nwere ekele maka IPX4 asambodo. Ọ bụ ezie na a priori maka imewe na ọdịdị ya, enwere ike iwere ya dị ka ọkà okwu ime ụlọ. Ihe ya na nguzogide ha na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ojiji n'èzí. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-achọ n'ezie, zụta ugbu a Ụlọ ihe nkiri Tronsmart na Amazon na-enweghị ụgwọ mbupu.
Onye na-ekwu okwu Tronsmart Studio nwere ike iji egwu kachasị amasị gị mee ihe niile. Maka nke a o nwere 1 subwoofer etiti obere ugboro, 4 ndị na-ekwu okwu ọnụ na-enye bass miri emi na ike, na 2 elu ugboro tweeters. Ndị na-ekwu okwu ole na ole n'ahịa na-agagharị na ọnụahịa ọnụahịa a ga-enwe ike ịnye ihe ọ bụla dị ka ya.
Ime site na akụkụ nke Tronsmart Studio
Anyị chọtara a kpochapụwo imewe nwere udi akụkụ anọ, ahịrị kwụ ọtọ na agba ojii. Ọkà okwu nwere usoro desktọọpụ nke ga-adaba n'ụzọ zuru oke na gburugburu ebe ọ bụla. O nwekwara ihe na-esi ísì ụtọ nke ụlọ ọrụ na-edekọ ihe nke emegharịrị ruo ugbu a.
Ọ nwere a aluminom chassis obi siri ike na, na mgbakwunye na inye gị ihe mara mma, enweghị atụ na ntụkwasị obi dị elu. Obi abụọ adịghị ya na ọkà okwu emebere ka ọ nụ ụtọ egwu nke kacha amasị anyị 100%.
N'elu anyị na-ahụ njikwa bọtịnụ anụ ahụ na rọba gbadoro anya nke ọma. Anyị nwere bọtịnụ ike, iji welite ma wetuo olu nkwughachi, kpọọ / kwụsịtụ. Enwekwara bọtịnụ maka njikọ bluetooth na smartphone ma ọ bụ kọmputa anyị. Na bọtịnụ abụọ ọzọ ga-eme, otu ịkpọku anyị olu olu, na ọzọ iji rụọ ọrụ ụda usu technology nke anyị gwara gị.
Na azụ anyị hụrụ ọdụ ụgbọ mmiri, na usoro USB Type C, nke na-akwado nchaji ngwa ngwa. Ọzọkwa ụzọ mbata Ogwe 3,5mm iji jikọọ ụfọdụ ngwaọrụ na-enweghị bluetooth. Na otu oghere kaadị ebe nchekwa Micro SD ebe anyị nwere ike ịgbakwunye egwu niile anyị chọrọ, nakwa maka ịkpọghachi na-enweghị bluetooth ma ọ bụ eriri.
Na okpuru anyị hụrụ otu ntọala nkwado mekwara nke rọba. Ngwa ahụ dabere kpamkpam na ya, na-anọgide na-ebuli elu n'ụzọ mara mma. Nke a roba na-ejekwa ozi dị ka ihe mgbochi-slip. Na karịa ihe niile iji zere ịma jijiji ga-ekwe omume na kọntaktị na tebụl mgbe anyị na-eji olu dị elu.
Nlereanya Igwe okwu ikuku ikuku Studio
Njikọ Bluetooth 5.0 + 3.5 + Micro SD Jack
Ogologo oge 20 Hz - 20000 Hz
Batrị 2 x 2000 mAh batrị
Oge nfe 3 - 3.5 awa
Akụkụ X x 206.5 70 58 mm
Ibu ibu 0.961 kg
Linkzụta njikọ Ụlọ ihe nkiri Tronsmart
Ahịa 79.99 €
Uru na ọghọm dị na Tronsmart Studio
Ogo ụda enweghị mgbagha n'olu ọ bụla.
Nnwere onwe nke awa 15 n'otu ụgwọ.
Ike 30W na ngwa kọmpat dị otú ahụ.
Teknụzụ TuneConn iji jikọta ihe ruru 100 ọkà okwu na otu ngwaọrụ.
Chassis ọla ahụ nwere ike ịka njọ ma ọ bụ nwee nkwarụ mgbe a tụbara ya.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu kilo.
Ọkà okwu ikuku ikuku Tronsmart Studio
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Ọkà okwu ikuku ikuku Tronsmart Studio, nyocha, atụmatụ na ọnụahịa
Otu esi eme ka egwuregwu gị na-agba ọsọ ọsọ na gam akporo
Otu esi enwetaghachi mkparịta ụka ehichapụrụ na Telegram